Current Affairs – OLI
Yeroo ammaa kanatti Adduunyaan jijjiirama saffisaa keessa jirti. Jijjirama yeroo kanaan waliin tarkaanfachuudhaaf immoo taatowwan Adduunyaa hamma naannoo keenyaatti guyyaadhaa gara yerootti ta’an jala bu’anii hordofuun baay’ee barbaachisaadha. Dargaggoon keenyas bu’uuruma kanaan taatowwan ijoofi waqtaawoo ta’an irratti hubannaa akka argatu fuula kanarratti ni dhiyaatu.
Keessumattuummoo dhimmoota ijoo hawaas dinagdee akkasumas hawaasummaa kallattiidhaanis ta’ee al kallattiidhaan nuufii uummata keenyaan walitti hidhata qaban irratti xiyyeeffachuudhaan dargaggoon keenya ilaalchi, hubannaanifi beekkumsi isaa akka dabalu ni godhama. Kana bifa ol’aanaa ta’een dhugoomsufis barruuleen hayyootaan barreeffaman bifa dargaggoota keenyaaf salphaafi ifa ta’een kan irratti dhiyaatan ta’a.